Insizakalo Yokuhlola - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Kungani ukuhlolwa kwe-ROCPLEX kungcono
Sineqembu lokuhlola ikhwalithi yobungcweti ezintweni zokwakha izinkuni.
Isipiliyoni seminyaka engu-25 sokwenza umkhiqizo nokuhlola ku-plywood, i-MDF, i-OSB, ibhodi le-melamine, imikhiqizo ye-LVL.
100% Okulungile, oqeqeshiwe futhi onzima.
Abahloli abango-100% abaqeqeshiwe.
Ukumboza izindawo zezimboni zaseChina.
Sinikezela ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Khipha umbiko wokuhlola kungakapheli amahora ayi-12 ngemuva kokuhlolwa.
Sinentengo engcono kakhulu.
Ilabhorethri YeBhodi Yezinkuni
Izinqubo zensizakalo (ngezinyathelo ezintathu nje, ukuhlolwa kuyenziwa）
Singenise ngendawo nemikhiqizo yokukhuthazwa.
Sizothumela abahloli abangochwepheshe endaweni ezohlolwa.
Uzothola umbiko wokuhlola kungakapheli amahora ayi-12.
Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthunyelwa (i-PSI)
Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthunyelwa kwenziwa lapho umkhiqizo usuphelile ngo-100% futhi u-80% upakishiwe. Sihlola ukuhlolwa okungahleliwe ngokusho kwezidingo zamakhasimende.
Embikweni ngaphambi kokuthunyelwa, sizokhombisa ngokuphelele ubuningi bokuthunyelwa, isimo sokupakisha nokuthi ikhwalithi yomkhiqizo iyahlangabezana yini namazinga.
Ukugwema noma iyiphi ingozi ku-oda lakho, qiniseka ukuthi imikhiqizo oyithengayo ihlangabezana nezimfuneko zakho nezinkontileka ngaphambi kokukhokhela umkhiqizo.
Okuqukethwe kokuhlola kufaka isitayela somkhiqizo, usayizi, umbala, ubuciko, ukubukeka, ukusebenza, ukuphepha, ukwethembeka, indlela yokupakisha, ilebula efanelekile, izimo zokugcina, ukuphepha kwezokuthutha nezinye izidingo ezichazwe ngamakhasimende.
Ngesikhathi sokuhlolwa komkhiqizo (DPI)
Lapho umkhiqizo usuphothuliwe ngama-50%, sihlola futhi sihlole ikhwalithi yemikhiqizo eqediwe futhi eqediwe ngokuya ngemininingwane yakho yomkhiqizo bese sikhipha umbiko wokuhlola.
Ukuhlolwa kokukhiqizwa kungakusiza uqinisekise ukuthi ikhwalithi, umsebenzi, ukubukeka nezinye izidingo zomkhiqizo ziyahambisana yini nemininingwane yakho kuyo yonke inqubo yokukhiqiza, futhi kuyasiza ekutholeni kusenesikhathi kwanoma yikuphi ukungathobeli, ngaleyo ndlela kunciphise ukubambezeleka kwemboni izingozi zokulethwa.
Okuqukethwe kokuhlola kufaka phakathi ukuhlolwa komugqa wokukhiqiza kanye nokuqinisekiswa kwenqubekela phambili, okuvumela imikhiqizo enamaphutha ukuthi ithuthukiswe ngesikhathi esifanele, kuhlolwe isikhathi sokulethwa, kuhlolwe imikhiqizo eseqedile enkambisweni ngayinye yokukhiqiza, nokubheka isitayela, usayizi, umbala, inqubo, ukubukeka, ukusebenza, ukuphepha, ukwethembeka, indlela yokupakisha, ukufakwa ilebula okuhlobene, izimo zokugcina, ukuphepha kokuhamba nezinye izidingo ezichazwe ngamakhasimende zemikhiqizo eqediwe.
Ukuhlolwa Komkhiqizo Wokuqala (IPI)
Lapho izimpahla zakho seziqediwe ngama-20%, abahloli bethu bazofika efektri ukwenza lokhu kuhlolwa okulandelayo kwemikhiqizo.
Lokhu kuhlolwa kungagwema izinkinga ze-batch kanye nokukhubazeka okukhulu kulo lonke uhlelo. Uma kunenkinga, unesikhathi sokuyithuthukisa ukuqinisekisa isikhathi sokulethwa kanye nekhwalithi yomkhiqizo.
Okuqukethwe kokuhlola kufaka phakathi ukuqinisekisa uhlelo lokukhiqiza, ukuhlola isitayela somkhiqizo ophelile, usayizi, umbala, inqubo, ukubukeka, ukusebenza, ukuphepha, ukuthembeka, indlela yokupakisha, ilebula efanelekile, izimo zokugcina, ukuphepha kokuhamba, nezinye izidingo ezichazwe ngamakhasimende.
Ukuhlolwa Okugcwele Nokuhlolwa Kokwamukelwa
Konke ukuhlolwa kungenziwa ngaphambi noma ngemuva kokupakisha ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, esikhungweni sokuhlola senkampani yethu noma endaweni ebekwe yikhasimende, sizohlola ukubonakala, ukusebenza nokuphepha komkhiqizo ngamunye; hlukanisa imikhiqizo emihle kusuka kumikhiqizo emibi ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo zekhwalithi yamakhasimende.
Futhi ubike imiphumela yokuhlola kumakhasimende ngesikhathi esifanele. Ngemuva kokuphothulwa kokuhlolwa, imikhiqizo emihle ifakwa emabhokisini futhi ivaliwe ngezimpawu ezikhethekile. Imikhiqizo enesici ihlukaniswa bese ibuyiselwa efektri.
I-ROC iqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ethunyelwe izofinyelela izidingo zakho zekhwalithi: Sizonikeza idatha yempendulo kufaka phakathi:
Yonke imibiko yokuhlola, izithombe ezihlobene, izimo ezingajwayelekile, izimbangela, izindlela zokulwa nezindlela zokucubungula isitshalo sokuhlola i-ROC sigxile ekuhlolweni kwemakethe yaseJapan. Ukuqaliswa okuqinile kohlelo lokuphatha lwesitayela saseJapan, nabasebenzi bokuhlola abangochwepheshe nezindawo zokuhlola ezilawulwa ngokuqinile, kungakunika izinsizakalo zokuhlola ngokugcwele esikhungweni sokuhlola.
Ukuqapha Ukukhiqiza (PM)
Abahloli bathunyelwa efektri kusukela ekuqaleni kokukhiqizwa ukulandelela nokuqinisekisa yonke inqubo yokukhiqiza, ikhwalithi nenqubekela phambili yokukhiqiza.
Hlaziya bese uthola izizathu zokukhiqizwa kwekhwalithi okungavamile, yenza izindlela zokumelana nezimbangela, uqinisekise ukuqaliswa kwefektri, bese ubika zonke izimo zensimu kuma-ustomer ngesikhathi esifanele.
Ukukhubazeka komkhiqizo kanye nenqubekela phambili yokukhiqiza kutholakala ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, futhi kwenziwa ngesikhathi esifanele izinhlelo zokulungisa ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ingakhiqizwa ngokushelela kuyo yonke inqubo yokukhiqiza.
Okuqukethwe kokuhlola kufaka phakathi ukuphathwa kwenqubekela phambili yokukhiqiza, ukuphathwa kwezingxenye ezimbi nokulawulwa ngesikhathi sokukhiqizwa, izidingo zokwenza ngcono ifektri, ukuqinisekiswa kokuqaliswa kokuthuthuka, ukuqinisekiswa kwemiphumela yokuqalisa, impendulo efike ngesikhathi ngezimo zokukhiqiza nezimo ezingajwayelekile.
Ukuhlolwa Kwemboni (FA)
Ngokuya ngezidingo zokucwaningwa kwamabhuku, abacwaningi mabhuku be-ROC bazocwaninga ukuthembeka kwebhizinisi labakhiqizi, amandla wokukhiqiza, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, ukuhlolwa kwamacala omphakathi, kanye nokuhlelwa kwenkampani nemibandela yokukhiqiza.
Sihlola amafektri ethu ukuze ukwazi ukukhetha umphakeli ofanele.
Ukuhlola kufaka phakathi ilayisense yebhizinisi lasefekthri, isitifiketi sefektri kanye nokuqinisekiswa kobunikazi, imininingwane yokuxhumana kwasefektri nendawo, ukwakheka kwenhlangano yenkampani nesikali, imibhalo nenqubo yokulawulwa, ukuqeqeshwa kwangaphakathi, izinto zokusetshenziswa kanye nokuphathwa kwabahlinzeki, ukuhlolwa kwangaphakathi kwelabhoratri nokuhlola, kanye namandla okuthuthukisa amasampula, izakhiwo zefektri nezimo zemishini, umthamo wokukhiqizwa kwefektri, izimo zokuhlela nokupakisha, ukulinganiswa kwamathuluzi nokugcinwa kwamarekhodi, ukuhlolwa kwensimbi, amasistimu wokulawulwa kwekhwalithi, umthwalo wezenhlalo, sicela ubheke kuhlu lwe-ROC lokuhlola amafektri ukuthola imininingwane.
Ukulawulwa Kokulayisha Isitsha (CLS)
Izinsizakalo zokuqapha zifaka phakathi ukuhlola isimo sesitsha, ukubheka imininingwane yomkhiqizo, ukubheka inani lemikhiqizo elayishwe esitsheni, ukubheka imininingwane yokupakisha, nokuqondisa yonke inqubo yokulayisha izitsha, ngokungahleliwe ukhetha ibhokisi lemikhiqizo ukuhlola ukubukeka nokusebenza kwayo.
Ukugwema ubungozi obukhulu bokulayisha umkhiqizo ongalungile noma owonakele, noma ngobuningi obungafanele, njll. Abahloli baqapha endaweni yokulayisha ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho igcwele ngokuphepha.
Okuqukethwe kokuhlola kufaka phakathi ukurekhoda izimo zezulu, isikhathi sokufika kwesitsha, inombolo yesitsha kanye nenombolo ye-trailer; noma ngabe isitsha sonakele, simanzi noma sinephunga elikhethekile, ubuningi nesimo sokupakisha sangaphandle; ngokungahleliwe behlola ibhokisi lemikhiqizo ukuqinisekisa ukuthi yimikhiqizo edinga ukuthi ilayishwe ezitsheni; ukwengamela inqubo yokulayishwa kweziqukathi ukuqinisekisa ukonakala okuncane nokukhulisa ukusetshenziswa kwesikhala; ukuvala iziqukathi ezinezimpawu zamasiko; ukuqopha izimpawu, nezikhathi zokusuka kweziqukathi.
Ochwepheshe ekukhuthazeni ibhodi lezinkuni, ngoba singumkhiqizi
Singumsekeli oqinile wokulawulwa kwekhwalithi ngaphambi kokukhipha izimpahla zakho eChina.
Ngesikhathi sokukhiqiza, izinto eziningi nemininingwane kungahamba kabi.
Ukuthola i-ejensi yokulawula ikhwalithi efanele kuyadingeka.
I-ROC yobungcweti ezintweni ezenziwe ngokhuni lwebhodi kusuka ku-ROC iminyaka engama-25 yokukhiqiza ibhodi.
Ukuhlolwa kwekhwalithi ye-ROC akugcini ngokukusiza ekuqinisekiseni nasekuthuthukiseni ikhwalithi yomkhiqizo, kepha futhi kuqinisa ibhizinisi lakho nokuthengisa, futhi kukusize wakhe idumela elihle njengoba siqinisekisa ukuthi amakhasimende akho
Izinzuzo zokuhlolwa kwe-ROC
Nciphisa ubungozi bekhwalithi yomkhiqizo iye kokuphansi kakhulu
Qinisekisa ikhwalithi yakho yokukhiqiza futhi unikeze ngezinyathelo zokwenza ngcono ngasikhathi sinye
Kukusiza ukuthi uqinisekise izinga lokuphasa
◎ Ngesikhathi esifanele
Qinisekisa isikhathi sokulethwa
Nciphisa izingozi zebhizinisi lakho
Kukusiza ukhethe umphakeli ongcono kakhulu
Vikela izingqinamba zekhwalithi ezingaba khona ukuthi zenzeke
Qinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ilayishwe ezitsheni ngendlela efanele nangobuningi obufanele
Ibanga Lensizakalo Yokuhlola Imikhiqizo
Ezinye izinto zokhuni